MGI Real Estate (Yangon, Myanmar) - Contact Phone, Address
+95 (09) 43164723
+95 09 32444610
Monday: 8:30 AM 5:30 PM See All
Registration code 3184
Company manager Ye Shin
Have questions? Get answers from MGI Real Estate or MyanmarYP.com users. Visitors haven’t asked any questions yet.
No.103, Buildding (B),Pyinnyawaddy Avenue, Yankin Township, Yangon, Myanmar, Yangon, Yangon Get Directions
Saturday: 8:30 AM 5:30 PM
မိုးကြိုးပစ် ရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်လမ်းမကြီးနာဘေး
မိုးကြိုးပစ်ရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်လမ်းကြီးနာဘေး ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ဦးတေဇ လိမ်မော်ခြံရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် မဟာအံထူးကံသာ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီးကို ၎င်းနေရာမှ လှမ်းပြီး ဖော်မြော်နိုင်ပါသည်။၎င်းနေရာသည် ဒီဇင်ဘာ...
သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ပုလဲကွန်ဒို အနီး
ပုလဲကွန်ဒိုနောက်ကျော့ဘက်၊ Regal Hotel အနီးရှိ ပေ ( ၃၅x၇၈) ခြံကွက်ကျယ်ကြီး အား ( ဘိုးဘွား ပိုင်ဂရန်+ ရေမီးစုံ ) သိန်း ( ၇၅၀၀ ) ဖြင့် ရောင်းမည်။ပတ်ဝန်းကျင် တိတ်ဆိတ်ပြီး၊ နေရာကောင်း၊ နေရာသန့် ဖြစ်သည်။ ...
ပြင်ဦးလွင်၊ သုံးတောင်ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံစီးတီးအနီး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြီးရဲ့နာဘေး ခြံစည်းရိုးဘေးခြင်းကပ်အနေအထား ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကြီး MCC institution များ၊ အစိုးရ ကွန်ပျုတာကျောင်းများလည်း အနီးအနားတွင် တည်ရှိနေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တိ...
City DevelopmentMGI Real EstateMyanmar Real EstateMyanmar Real Estate DevelopmentYe Shin
MGI Real Estate - company profile is confirmed by company owner / representative person / directory administrator.
Related Companies to MGI Real Estate
Search Results Related to MGI Real Estate
Commercial Property in YangonReal Estate Agents in YangonOnline Property Listings in YangonProperty Consultants in YangonProperty Development in Yangon